ग्वाला गएकी रुपाको गाईले खोलो तरेपछि के भयो ? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित) – Pahilo Page
ग्वाला गएकी रुपाको गाईले खोलो तरेपछि के भयो ? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
काठमाडौं । ग्वाला गएकी रुपा घर्तीमगरको गाईले खोला तरेको छ । यद्यपि गायिका रुपा घर्ती साँच्चिकै गाई ग्वाला गएकी हैनन् र उनको साँच्चिकै गाईले खोलो तरेको पनि होइन । वास्तवमा महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीज पर्व नजिकिँदै गर्दा उनको तीज गीतमा गाईले खोली तरेको हो ।
गायिका रुपा घर्तीमगरले “खोली तर्यो गाई” बोलको तीज गीत कोसेली लिएर आएकी छन् । मौलिकता हराउँदै गएको वर्तमानमा रुपाको तीज गीतमा नेपाली हिन्दु नारीहरुको तीजको मौलिकता र अपनत्व पाउन सकिन्छ । गाउँमा बोलिने ठेँट शव्दहरुले भरिएको रुपमाको तीज गीतमा रुपा र आश्मा दर्लामी मगरको संयुक्त स्वर रहेको छ ।
मायाप्रेममा आधारित लाहुरेसँग प्रेम बसेको कथाबस्तु गीतमा उनिएको छ । शिव हमालको शब्द÷संगीत रहेको यो गीतलाई तिर्सना म्युजिक प्रालिले बजारमा ल्याएको छ । यो गीतको म्युजिक भिडियोमा आरुषी मगर, बिनु खड्का, बुद्धिवीर थापाले अभिनय गरेका छन् । बसु बरालले छायाङ्कन गरेको यो गीतको निर्देशन विक्रम चौहान र सम्पादन मिलन विकले गरेका छन् ।
“खोली तर्यो गाई” हेर्नुहोस् भिडियो
प्रकाशित मिति : बुधवार, साउन २५, २०७४ समय : १५:३१:०० 2806 पटक पढिएको